अब चोर यसरी पत्ता लाग्छः ताप्लेजुङका पूर्ण कुमार लंवा लिम्बूले विकास गरे ‘अटो सेक्युरिटी सिस्टम’Namaste Nepal
अब चोर यसरी पत्ता लाग्छः ताप्लेजुङका पूर्ण कुमार लंवा लिम्बूले विकास गरे ‘अटो सेक्युरिटी सिस्टम’
| २०७५, १४ फाल्गुन मंगलवार १४:१५ , प्रकाशीत
ताप्लेजुङ । मेरिङदेग गाउँपालिका ४ नम्बर वडा, लिङतेप निवासी पूर्णकुमार लंवा लिम्बूले चोर पत्ता लगाउने ‘अटो सेक्युरिटी सिस्टम’ प्रविधिको विकास गरेका छन् । उक्त प्रबिधिले सेन्सरका माध्यमबाट एकै साथ फोटो र भिडियो लिन्छ । सेन्सरकै माध्यमबाट सम्बसन्धित ब्यक्तिलाई फोन पनि गर्छ । मोबाइल फोन सेट, लेन्स (क्यामेरा) रेडियोका बिभिन्न पार्टसे जडान गरेर सेन्सरको माध्यमबाट उक्त प्रबिधि लामो समयको अनुसन्धानपछि तयार गरेको लिम्बूले Phaktanglung Online TV (फक्ताङलुङ अनलाइन टीभी ) र रेडियो फक्ताङ्लुङ एफएम 89.8 मेगाहर्जको कार्यक्रम फक्ताङ्लुङ बहससँग कुरा गर्दै भने, ‘यो प्रबिधि तयार गर्न लामो अध्ययन र अनुसन्धान गरें, खर्च पनि उतिकै लाग्यो । सबै खर्च आफुले नै जुटाईयो ।’ यो प्रबिधि अध्ययनपछि जडान गर्न र बनाउन १ महिनाबढि लागेको लिम्बूले बताए । उक्त प्रबिधि निर्माणपछि रेडियो फक्ताङ्लुङको कार्यालय, फुङलिङमा शुक्रबार सफल परीक्षण गरिएको छ । उक्त परीक्षणको भिडियो सामाग्री फक्ताङ्लुङ अनलाइन टीभीबाट चाँडै हेर्न सक्नुहुनेछ । ८ कक्षा मात्र औपचारिक अध्ययन गरेका लिम्बूको स्वअध्ययनले नै यो प्रबिधि विकास सम्भब भएको हो ।
अटो सेक्युरिटी सिस्टम के हो ?
सेन्सर प्रणालीद्वारा निर्माण गरिएको प्रबिधि ‘अटो सेकयुरिटी सिस्टम’ प्रबिधि हो । जसले, सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्छ । यो प्रणली जडा गरिएको स्थान, घर, सार्बजानिक ठाउँ र सार्बजानिक वा प्राइभेट कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनको निगरानी गर्छ । यो प्रबिधि जडान गरिएको स्थानमा कुनै ब्यक्ति प्रबेश गर्नसाथ फोटो कैद गर्न र भिडियो रिकर्ड गर्न शुरु गर्छ । यो प्रबिधि इच्छा अनुसारको लागतमा अर्डर गर्न सकिन्छ । कति क्षमताको ब्याट्री ब्याकअप, क्यामेरा वा लेन्स राख्ने र कुन र कति ठाउँमा जडान गर्ने ? त्यसको आधारमा यो प्रबिधि को निर्माण हुने आबिस्कारक पूर्णकुमार लंवा लिम्बू दाबि गर्छन् ।
अटो सेक्युरिटी सिस्टमका ७ ओटा बिबिध डिभाइस हुन्छन् । २ ओटा ढोकाको दायाँबायाँ साइडमा नदेखिनेगरि राखिन्छ । ढोका वा कुनै प्रबेशद्वारको सामुन्ने फोटो क्याप्चर गर्ने क्यामेरा जडान गरिएको हुन्छ । अर्को कुनै पनि स्थान जहाँबाट सम्पूर्ण कोठा वा स्थान देख्न सकियोस्, त्यो ठाउँमा भिडियो क्यामेरा वा सीसीटीभी राखिएको हुन्छ । कुनै ब्यक्ति कोठामा प्रबेश गर्नेबितिकै अटो कल फर्वाड गर्नको लागि मोबाईलफोज जडान गरिएको हुन्छ । सो फोनले सम्बन्धित ब्यक्तिलाई कल गर्छ । त्यसपछि सो ब्यक्तिले सोहि फोन मार्फत ति कोठा वा घरमा प्रवेश गरेको ब्यक्तिलाई साबधान गराउने काम पनि गर्दछ । यदि अपरिचित तथा अपराधी वा चोर हुन् भने, जुनसुकै स्थानमा रहे पनि प्रहरीलाई फोन गरि तुरुन्त पक्राउ गर्न सकिन्छ ।
घरको ढोका वा कुनै प्रबेशद्वारमा जडान गरेर राख्न सकिने यो प्रविधिले कोही मानिस ढोकाभित्र प्रबेश गर्नेबितिक्कैै फोटो लिन र भिडियो रिकर्ड गर्न शुरु गर्छ । मोबाइलमा फोनसमेत डायल हुन्छ । जुन नम्बर सेटिङ गरेर राखिएको हुन्छ, त्यहीँ नम्बरमा फोन डायल हुन्छ । जब ढोकाबाट बाहिर निस्किएपछि उक्त प्रविधि निष्क्रिय हुन्छ । लाइटिङ कन्ट्रोल मेशिन तयार गरेर एक महीनासम्म स्थानीय जलविद्युत् आयोजनामा जडान गरी प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यस प्रबिधि चट्याङबाट हुने क्षतिलाई रोक्ने कार्य गथ्र्यो । चट्याङ पर्नुअघि नै विद्युत् जेनेरेटरलाई बन्द गर्ने क्षमताको उक्त प्रविधि बनाउन पनि एक महीना समय लागेको लिम्बूले बताए ।
औपचारिक शिक्षा कक्षा ८ सम्म मात्र अध्ययन गरेका २५ वर्षका लिम्बूले सानै उमेरदेखि प्रबिधिमा रुचि थियो । रेडियो, घडीलगायत इलेक्टोनिक सामग्रीको मर्मत गर्दथे । ‘सानै उमेरदेखि रेडियो घडीको मर्मत गर्ने कार्य गर्दै आए, रेडियोमा भएका बिभिन्न पार्टसले के काम गर्छ ? भन्ने अध्ययन गर्दै गएपछि त्यस पार्टसबाट नयाँ कुराको सिर्जना गर्न थालियो र अहिले सबैलाई काम लाग्ने प्रविधिको विकास गर्न सफल भएँ ।’ उनले भने ।
लिम्बूलाई शिबको साथः छरछिमेक खुशि
२५ वर्षीय पूर्णकुमार लिम्बूको क्षमता र प्रबिधिको विकास अनि सफल परीक्षणलाई देखेर परिवार र छिमेक खुशि छन् । ८ कक्षा मात्र औपचारिक अध्ययन गरेका लिम्बूको स्वअध्ययनले नै सबै प्रबिधिको सम्भब तुल्एको हो । न तालिम, न औपचारिक शिक्षा, घरमा बसेर एकपछि अर्को प्रबिधि तयार गरि सफल परीक्षण गर्दा, छिमेकी चकित छन् । पूर्णकुमारका जेठा दाई शिबकुमार लंवा लिम्बूले भाईको काममा साथ दिएका छन् । उनी भाईको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छन् ।
बैदेशिक रोजगारिमा हुँदा पनि आफूले, भाईको काममा आर्थिक ब्यबस्थापन गरेको बताए । शिबकुमारले पूर्णकुमारको काम स्थानीय र नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकोले स्थानीय वा नेपाल सरकारले आफ्नो भाइको कामलाई राज्यले ब्यबस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बिभिन्न सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रचारप्रसारको लागि आग्रह छ ।’ शिबकुमारले भने । अहिले आर्थिक ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा र स्थानीय र नेपाल सरकार बेखबर हुँदा, भाईको काम प्रभाबित भएको बुझाइ छ । सरकारले ब्यबस्थापन गरेको खण्डमा भाईले देशकै लागि उदाहरणीय काम गर्न सक्छन् । शिबकुमार भन्छन् ।
देशमा भएको प्रबिधि विकाप्रति सरकार बेखबर
प्रबिधि क्षेत्रमा नयाँ आबिस्कार स्थानीयबाट हुँदा पनि, स्थानीय सरकार र नेपाल सरकार बेखबर छन् । न पूर्णकुमार लंवा लिम्बूलाई सहयोग छ, न साथ छ । तर, उनी आफ्नो काममा रातदिन लागिपरेका छन् । नयाँ प्रबिधिको विकासमा प्रचण्ड मेहेनग गरिरहेका छन् । कुनै प्रबिधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्दा, लाखौं रुपैयाँ लाग्छ । त्यो सबै आर्थिक ब्यबस्थापन आफैले गर्दै आएका लिम्बूले, स्थानीय सरकारलाई औपचारिक रुपमा सहयोग नमागेको बताए । तर, उनको काममा सरकारले लगानी गरे, थप हौसला र प्रबिधि विकासमा आफूले केहि गर्नसक्ने बताउँछन् । बिभिन्न आबश्यक सामग्री खरिद गर्नको लागि सरकारले सहयोग गरे, प्रबिधिको विकासमा आफ्नो सीप र मिहेनतले राज्यलाई नै सहयोग पुग्ने लिम्बू बताउँछन् । बिभिन्न डिभाइसहरूको आबश्यकता रहेको तर त्यसको ब्यबस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् ।
लिम्बूको भाबी योजना के छ ?
टाइमिङ सिस्टमबाट घरमा बसेरै, लघुजलबिद्युक अफ गर्ने प्रबिधि र अटो लाइटिङ सिस्टम अनि पछिल्लो समयमा अटो सेक्युरिटी सिस्टम प्रबिधिको विकास गरेका लिम्बूको अध्ययन र अनुसन्धान जारि छ । अब छिट्टै अटो सेक्युरिटी सिस्टमलाई विकास गरेर, घर वा कुनै प्रवेशद्वार सेन्सरबाटै खोल्न र बन्द गर्न सकिने प्रबिधि बनाउनलाई अध्ययन गरि काम शुरु गरेका छन् ।
त्यस्तै, संसारमा, अटो भोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम (एभीआर) बाट बिद्युत उत्पादन हुन्छ । तर, यो सिस्टमबिना बिद्युत उत्पादन गर्ने प्रणलीको विकास गर्ने बताए । ब्यक्तिगत सुरक्षा वा पर्शनल सेक्युरिटी सिस्टम पनि विकास गर्ने तयारी छ । लिम्बूले, उक्त ब्यक्तिगत सेक्युरिटी सिस्टम बारे बिस्तृत जानकारी गराउन उचित नठानेनन् । प्रबिधि विकास गरेपछि मात्र सार्बजानिक गर्ने उनले बताए । यसअघि बिद्युत् कन्ट्रोल गर्ने प्रणली र विद्युतको टर्वाइन खुल्ने र बन्द हुने ‘अटो पावर अनअफ सिस्टम’ परीक्षण गरिसकेका लिम्बूले पछिल्लो समय विकास गरेको ‘अटो सेक्युरिटी सिस्टम’ प्रबिधि फुङलिङस्थित रेडियो फक्ताङ्लुङ एफएमको कार्यालयमा ल्याएर सफल परीक्षण गरे । स्रोत: रेडियो फक्ताङलुङ